မြန်မာ အချစ်သီချင်းများ စုစည်းမှု / Myanmar Love Songs Album / Nonstop Play / Black Music Myanmar – My Popcorns
Previous 90's Unforgettable Golden Hits | Evergreen Romantic Songs Collection | JUKEBOX | Hindi Love Songs
Next Lewis Capaldi Greatest Hits Full Album | Lewis Capaldi Best Songs 2020
မြန်မာ အချစ်သီချင်းများ စုစည်းမှု / Myanmar Love Songs Album / Nonstop Play / Black Music Myanmar
Categories Select Category *Audibooks (1,991) *Documentary (2,009) *Foods (1,999) *Funny (2,003) *News (454) *Travel (1,865) *World Music (2,019) Cartoon/Animated (2,154) Chinese (2,214) Collection (7,017) English (2,247) French (2,173) Indian (2,215) International movies (2,202) Japanese (1,746) Korean (1,724) Nigerian (2,174) Vietnamese (1,575)
29 seconds ago	 No Comments on Best Of Smosh: Try Not To Laugh
3 mins ago	 No Comments on Homeless Wife – Action Movie 2021 full movie English Action Movies 2021
4 mins ago	 11 Comments on Jurassic Planet – Frankie Ray – Film complet en français – Dinosaures – Action
5 mins ago	 33 Comments on Mukunda | South Indian Hindi Dubbed Full Movie | Varun Tej, Pooja Hegde, Prakash Raj, Rao Ramesh
6 mins ago	 23 Comments on Blind Date || Episode 50 || Elimination Round 2
8 mins ago	 22 Comments on I Tamil Full HD Movie without Censor Cut with English Subtitles – Vikram | Amy Jackson | Shankar
9 mins ago	 37 Comments on The Fighter and The Kid – Episode 737
EVERY GOOD MAN NEEDS TO SEE THIS MOVIE – african movies 2021
10 mins ago	 No Comments on EVERY GOOD MAN NEEDS TO SEE THIS MOVIE – african movies 2021
New Tagalog Dubbed Movies in 2021 HD 1080p Trending Movies Today #030
12 mins ago	 No Comments on New Tagalog Dubbed Movies in 2021 HD 1080p Trending Movies Today #030
13 mins ago	 No Comments on Swaralayam (1987) Non Stop Malayalam Movie Songs | Music By KV Mahadevan
guests – 707
bots – 945
Black Music Myanmar Channel တွင်ကြိုးဆိုပါသည်း☺
သီချင်း အသစ်များကြည့်ရန် YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်​ပေးထာပါ 🤩🤩😍😍
မြန်မာ အချစ်သီချင်းမျာ းစုစည်းမှု / Myanmar Love Songs Album
Time. No, song Name
00:00:00 /01 – သူသိပါကွယ်
00:03:15 /02 – သတိရရင်ပြီးတာပဲ
00:08:18 /03 – တစ်ဘဝလုံး ချစ်မယ်သူ
00:12:15 /04 – စွမ်းအား
00:16:15 /05 – ဆုံနိုင်ခွင့်
00:20:55 /06 – ဆန္ဒများနဲ့အဝေး
00:24:42 /07 – နောက်ဆုံးမင်းရဲ့ရင်ခွင်ဆီ
00:29:06 /08 – မင်းပေးတဲ့ကမ္ဘာ
00:32:42 /09 – မခွဲကြေး
00:36:00 /10 – လိုက်ဖက်တဲ့ဘဝ
00:40:28 /11 – လမ်းမခွဲကြေး
00:45:11 /12 – တို့မဝေးဘူး
00:49:24 /13 – ဒါဟာအချစ်လား
00:53:29 /14 – ဘယ်တော့မှမဝေးဘူး
00:57:57 /15 – အသက်လို
01:02:16 /16 – အဖော်
01:06:46 /17 – အမြဲတမ်းချစ်သူ
01:10:52 /18 – အချစ်ကိုကိုးကွယ်
01:15:32 /19 – အချိန်နဲ့နေရာ
01:19:07 /20 – တည်ရှိခြင်းအကြောင်း
👉👉Follow Black Music Myanmar
⏩ Facebook – https://facebook.com/blackmusicmyanmar
⏭ Instagram – https://www.instagram.com/Black_Music_Myanmar/
⏩ YouTube – https://www.youtube.com/c/blackmusicmyanmar
⏭ Email – blackmusicmyanmar@gmail.com
ဒီးသီချင်း အမျိုးအစား 👇👇👇👇
#Myanmar #love #songs
01 – သူသိပါကွယ်
02 – သတိရရင်ပြီးတာပဲ
03 – တစ်ဘဝလုံး ချစ်မယ်သူ
04 – စွမ်းအား
05 – ဆုံနိုင်ခွင့်
06 – ဆန္ဒများနဲ့အဝေး
07 – နောက်ဆုံးမင်းရဲ့ရင်ခွင်ဆီ
08 – မင်းပေးတဲ့ကမ္ဘာ
09 – မခွဲကြေး
10 – လိုက်ဖက်တဲ့ဘဝ
11 – လမ်းမခွဲကြေး
12 – တို့မဝေးဘူး
13 – ဒါဟာအချစ်လား
14 – ဘယ်တော့မှမဝေးဘူး
15 – အသက်လို
16 – အဖော်
17 – အမြဲတမ်းချစ်သူ
18 – အချစ်ကိုကိုးကွယ်
19 – အချိန်နဲ့နေရာ
20 – တည်ရှိခြင်းအကြောင်း
ဒီး Channel တွင်တင်​ပေးမယ် သီချင်း အမျိုးအစား 👇👇👇👇👇👇
#မြန်မာသီချင်းများ #အင်္ဂလိပ်သီချင်းများ #သီချင်းအမျိုးဆုံး
#ရီးမစ်သီချင်းများ #ဒီး​ဂျေးသီချင်းများ #း ##တိ​တောသီချင်းများ #နာမည်ကြီးသီချင်းများ #လူကြိုက်အများဆုံးသီချင်းများ #မြန်မာသံစဥ်များ #သီချင်းများစုစည်းမှု
#MyanmarSongs #Englishsongs #AllSongs #Remixsongs
#DjSongs #tiktokSongs #Hitsongs #BestSongs
#Nonstop #Mininonstop #album
ဒီ You Tube Channel တွင်မြန်မာနှင့်တစ်ခြားသီချင်းများ , DJ, Remix , Nonstop , တင်ပေးမှာဖြစ်ပါသည် |
သီချင်းများကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဆိုရင် ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီ Channel ကို subscribe လုပ်ပေးပါ ☺️☺️
Facebook page ကိုလဲ like လုပ်​ပေးကြာပါးနော်……… ☺☺
2020 ခေတ်သစ်အချစ် သီချင်းများ ဒီဂျေသီချင်းများ မြန်မာ အချစ်သီချင်းများ မြန်မာသီချင်း မြန်မာသီချင်းများ လူကြိုက်အများဆုံးမြန်မာသီချင်းများ သီချင်းသစ် အကောင်းဆုံး အချစ်သီချင်း အချစ်သီချင်းများ အ​ကောင်ဆုံးသီချင်းများ ြမန်မာ best Black Black Music Myanmar Burma Burmese DJ Remix hit hot love Music Myanmar Myanmar hit songs Myanmar love songs Myanmar love songs Album Myanmar sad songs Myanmar songs New song video
Black Music Myanmar
साधना के गाने | Sadhana Songs | सदाबहार पुराने गाने | दर्द भरे गाने | लता मंगेशकर के गाने | Intaquam
Johny Johny oui papa – Version Titounis – Comptines et chansons pour les enfants
Comptines et chansons – 3h – Monde des Titounis – Ah les crocodiles
October Mood – Chill vibes 🍂 English songs chill music mix
Bollywood 90's Love Songs | Hindi Romantic Melodies Songs — Kumar Sanu Alka yagnik Udit Narayan
HOGI's Best Songs ONLY | Learn Colors and Sing Along with Hogi | Nursery Rhymes | Hogi Kids Songs
Emisión en directo de The Persimons Music Band
The Persimons Music Band
Nuit Calme 💤 Musique Pour Soulager l’insomnie 💤 Dormez Bien et Naturellement
Great Myanmar love songs! Very soothing to the ears! Although I don't understand. Keep singing n bring love and joy to the people! Keep it up Myanmar!
I dont understand any words but i love burmese girls so cute 🥰🥰🥰
AgKyaw Kyaw says:
Jeffryan Tiow says:
It’s pleasant to hear although I don’t understandawords ❤️
Naw Gae says:
Favorite love songs 💓
roy marten says:
because of this song i got beautiful myanmar girl
Sandar Hoe says:
This playlist is so good especially the first song. It made me cry tears of joy. It brings me back to the old days of my university.
zung tha says:
Terry Yeo says:
First time listening Myanmar love song.. Love it 😍😍😍
Xindong Gong says:
စစ်တပ်ကဗမာလူမျိုးတွေကိုသတ်ဖြတ်တဲ့အခါတိုင်းပြည်ကိုမေ့သွားတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ဗမာအုပ်ထိန်းသူတွေအနေနဲ့မသင့်တော်တော့ဘဲဗမာပြည်ရဲ့အသက်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ ညစဉ်တိုင်းအပြစ်မဲ့ပြီးလက်နက်မဲ့မြန်မာလူမျိုးများကိုမြို့တော်ရှိရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောစစ်သားများကသတ်ဖြတ်ကြသည်။ မြန်မာပြည်သူများသည်ဖိနှိပ်ခြင်းမခံရတော့ပါ။ လူတိုင်းတွင်တင်းနစ်ဒကက်၊ ဖန်ခွက်ပုလင်း၊ ဓာတ်ဆီစည်သာရှိခြင်း၊ စွန့်ပစ်ရော်ဘာတာယာအပိုင်းအစများသည်မြန်မာစစ်သားများကိုသတ်ဖြတ်ရန်စစ်တပ်အားတားဆီးနိုင်သည်။ ထိုစစ်သားများသည်ရိုဟင်ဂျာ ၁ သန်းလုံးနီးပါးကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ယနေ့တွင်သူတို့သည်မြန်မာပြည်သူများကိုရန်ကုန်ရှိလူများအားသေနတ်များဖြင့်ညွှန်ပြခဲ့သည်။ မြန်မာပြည်ကိုသစ္စာဖောက်ခဲ့ကြသည်။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုရှိသောစစ်အစိုးရတစ်ခုတည်းသာရှိသေးသည်။ ပြည်သူတွေရဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုဟာနေ့တိုင်းဖြစ်ပျက်နေပြီးမြန်မာပြည်သူတွေဟာရှင်သန်ရန်စည်းလုံးညီညွတ်နေရမယ်။ အာဏာရှင်စနစ်နှင့်အာဏာရှင်စနစ်အားလုံးဖယ်ရှားပစ်ရမည်။ မြန်မာပြည်သူများကိုသတ်ဖြတ်သောစစ်အစိုးရသည်ပြိုကွဲသွားရမည်။ ဗမာလူမျိုးများကိုသတ်ဖြတ်သောစစ်တပ်သည် ၆၀၀၀၀ သာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့လူ ဦး ရေမှာ ၇ ဒသမ ၃ သန်းဖြစ်သည်။ စစ်တပ်သည်ပြည်သူများကိုရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ လူများကိုသတ်သောစစ်အစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီးသွေးကိုစီးဆင်းစေနိုင်သည်။ သို့သော်သွေးသည်အချည်းနှီးမစီးပါ။ မြန်မာလူမျိုးများစည်းလုံးညီညွတ်စွာတော်လှန်ရေးဖြစ်ပါစေ၊ ငွေစက္ကူပုံသဏ္reာန်ကိုပြန်လည်ရေးရန်နှင့်နောက်မျိုးဆက်များသည်သူတို့၏ကလေးများအားစစ်သားများကနေ့တိုင်းအဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းနှင့်မုဒိမ်းကျင့်ခံရမည်ကိုစိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ အကျင့်ပျက်စစ်တပ်အစိုးရသည်ပြည်သူများကိုကြာရှည်စွာဖိနှိပ်ခဲ့သည်။ မြန်မာပြည်သူများသည်အနာဂတ်ကိုကျော်လွှား။ မိမိတို့တိုင်းပြည်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ထပ်မံ၍ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီးကြီးမြတ်သောဗမာပြည်ဖြစ်လာနိုင်စေရန်ဤအချိန်တွင်တုန်လှုပ်နေရမည်။ မြန်မာလူမျိုးများအသက်ရှင်ရပ်တည်ခွင့်သည်အကြီးမားဆုံးအတွေ့အကြုံရှိပါစေ။
Yisoe Yisoe says:
Ramon Marco Zipagan says:
เลเล เอ says:
pink while says:
Mkn Bishnu says:
အမုႏု္းမ ရိွတဲ့အခ်စ္ says:
Ohn Mar says:
โรชินี มาลิกา says:
thi ri says:
အငု္ကSandar Sanအ့က says: